Momba anay | Taizhou Bendi Valve Co., Ltd.
Taizhou Bendi Valve Co., Ltd.naorina tamin'ny 1988. Miorina amin'ny toby fanondranana lehibe ho an'ny faritra sy kojakoja ao Yuhuan.Bendi traikefa amin'ny famolavolana, famokarana, varotra ary serivisy aorian'ny fivarotana ho an'ny indostrian'ny valizy maotera sy motera. Bendi dia orinasam-teknolojia avo lenta an'ny faritany izay nahavita tamin'ny ISO9001: 2000 sy ISO / TS16949: fahazoan-dàlana iraisam-pirenena momba ny kalitao 2009.
Ny vokatra dia manarona firenena sy faritra am-polony, toy ny: Amerika atsimo, Amerika avaratra, eoropa ary azia, ary manana OEM miaraka amin'ny valizy maotera Russia Company sy ny orinasa OEM ato an-toerana izahay.
Izahay dia mandray rafitra mandroso kalitao sy fitantanana ary haitao mandroso ho an'ny famokarana. Ny teknolojia fanapahana, ny fitaovana mandroso, ny traikefa manankarena ary ny fitantanana maoderina dia ireo tombony miavaka ananantsika ary lasa antoka matanjaka amin'ny famokarana vokatra valizy tsara indrindra.
Izahay dia iray amin'ireo marika ekena indrindra amin'ny tsenan'ny varotra aorinan'ny fiara any Sina. Efa 20 taona mahery izay no nanompoanay ny indostrian'ny varotra manerantany ary namokatra valizy motera 5 tapitrisa mahery isan-taona. Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra vokatra vaovao mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, ary manome toky lalina ny kalitaon'ny santionany / sary novidina tamin'ny mpanjifa. Manana laboratoara fanaraha-maso kalitao avo lenta koa izahay miaraka amin'ny fitaovana sy fitaovana fitsapana farany.
Amin'ny fifaninanana tsena masiaka dia manizingizina hatrany ny handresy mpanjifa amin'ny vokatra avo lenta, teknolojia avo lenta ary serivisy ambony kalitao ny BENDI. Manana ny tambajotram-barotra rehetra izahay, mandrafitra rafitra serivisy feno sy feno, mba hahafahan'ny mpanjifa mahazo consultation sy serivisy amin'ny voalohany. Manangana fifampitokisana izahay ary manaraka ny fepetra takiana amin'ny lalàna mifehy sy ny kalitao rehetra amin'ny alàlan'ny fanomezana vokatra sy serivisy mifanaraka amin'ny zavatra antenain'ny mpanjifa sy ny safidiny. Ny olon-drehetra ao amin'ny orinasanay dia mahazo izany miaraka amin'ny kileman-toetra aotra ary tsy misy fihetsika mandany fako. Fanaraha-maso ny kalitaon'ny orinasa manoloana ny valiny avy amin'ny mpanjifa.
Ny fahitana BENDI dia: "Ho tonga mpanamboatra valizy maotera tsara indrindra eran-tany."